Tsy marefo ny zaza vita vaksiny | UNICEF Madagasikara
I Tanteliniaina dia nampanao vaksiny an’i Najoro zanany, 2 volana sy tapany, araka ny tetiandro fanaovam-baksiny, sady nanamafy ihany koa ny hery fiarovany nandritra ny fanentanana mahakasika ny vaksinin'ny lefakozatra.
Ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fanentanana momba ny fisorohana ny aretina lefakozatra miaraka amin'ny fanarenana ny fahataran’ny vitamina A sy ny fanaovam-baksiny mahazatra, izay mikendry distrika 85 amin'ny faritra 15 eto Madagasikara, dia notontosaina ny 28 jona 2021 tao amin'ny distrikan'Ankazobe, faritra Analamanga. Tena niantsoroka niaraka tamin’ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ireo manam-pahefana teo an-toerana ho fikarakarana ilay hetsika. Taorian'ny lanonana ofisialy dia notanterahin'ireo tompon’andraikitra ireo ny fanaovam-baksiny “polio” ho an'ireo zaza nentin'ny reniny an-tsitrapo.
Tanteliniaina, renim-pianakaviana 21 taona, dia isan’ireo reny nitondra ny zanany tsy anteritery. Mipetraka ao amin'ny fokontany Mandrosoa, 10 kilometatra miala ny renivohitry ny distrikan'Ankazobe izy ary nitondra ny zanany faharoa, Najoro, 10 herinandro, tamin'ny fiara fitateram-bahoaka mba hanaovan’io zaza io vaksinin'ny polio ary hamitany ny vaksiny mahazatra, andiany faharoa. Nasongadiny ihany koa fa ny zanany lahimatoa, 4 taona, dia miandry ny fahatongavan'ireo mpanao vaksiny any an-tranony any Mandrosoa mba hahafahany manao vaksiny miaro amin'ny lefakozatra.
Raha nanontaniana momba ny antony nananany zotom-po amin'ny fanaovam-baksiny i Tanteliniaina dia nanazava izy hoe: « Hitako fa tsy marefo ny zaza vita vaksiny. Tsy marary matetika izy ireo ary voatsabo mora kokoa ny aretiny. Vokatr'izany dia nanaja fatratra ny tetiandro fanaovam-baksiny ho an'ny zanako voalohany toy ny anakandriamaso aho, ary manao toy izany koa amin'ilay zanako faharoa. Tsy izany ihany: isaky ny misy fanentanana mahakasika ny fanaovam-baksiny dia tsy diso anjara mihitsy aho mba hanamafisana kokoa ny hery fiarovan’izy ireo manoloana ny areti-mandoza sy mahafaty izay mety mahazo ny zaza ».